Bakhala ngokucekelwa phansi kwesakhiwo eMbali | News24
Bakhala ngokucekelwa phansi kwesakhiwo eMbali
Isakhiwo sabadayisi basemgwaqeni esicekelwe phansi ngaphambi kokuba siphothulwe.ISITHOMBE: lethiwe makhanya
SEKUVUKE ukukhathazeka ngokucekelwa phansi kwesakhiwo ebesakhelwe abantu abadayisa ngaphandle komtholampilo waseMbalenhle eMbali Unit 3 njengoba lesi sakhiwo sesicekelwe phansi sakhishwa namawindi ngaphambi kokuba sinikezwe ngokusemthethweni kubantu abazosisebenzisa.
Lesi sakhiwo esinezindawo zokudayisela ezili-10 besakhiwe ngenhloso yoku lekelela labo abadayisa emgwaqeni kule ndawo ukuba bangahlupheki uma ngabe izulu lina okanye kushisa ilanga.
Ngokuthola kwe-Echo lesi sakhiwo bese sakhiwe saqedwa safakwa namawindi kanye nezicabha kodwa lokho kube yizeleze ngoba kugcine sekuntshontshwa amawindi, kwasikwa iminyango kwashishwa ngisho nompompi.
Sigcine sesiphenduka indawo okuhlanganelwa kuyona uma ngabe abantu befuna ukwenza izinto ezingalungile.
Elinye ilunga lomphakathi elihlala eduzane nakule ndawo elikhulume ne-Echo kodwa langathanda ukuba kudalulwe igama lalo lithe ngemuva kokuba lendawo igqekeziwe yakhishwa namawindi ibe isiphenduka isidleke sezidakamizwa.
“Ngesikhathi iqala ukwakhiwa kwakukhona unogada owayehlala eyigada nangesikhathi isanda kuphela kodwa sathi sesiyabona unogada akasekho nokuyilapho esikholelwa khona ukuthi kwaqala izinkinga abantu bathola ithuba lokuthi bagange.
“Ibuhlungu lento ngoba ekugcineni lezi zinto zisuke zakhelwe ukusiza thina ziphinde zithuthukise imiphakathi yethu kodwa futhi ithina esesigcina sizimosha sidlala ngazo,” kubeka yena.
Elinye ilunga lomphakathi lithe : “Ukuhamba kukanogada ave kwayimosha lendawo.
“Ukube nje ayizange imoshwe kanje hlampe angabe nabanikazi bazo sebesebenzela khona ngoba phela nezimvula ziyana namakhaza nawo asezoqala.”
Ibamba lokhulumela umasipala uMsunduzi uNks Ntobeko Ngcobo uthe lesi sakhiwo sase siya ngasemaphethelweni kanti futhi nezinga laso laligculisa kodwa kwaba khona uhlu lwezinto usonkontileka okwakumele azikhulume ngaphambi kokuba lesi sakhiwo sinikezwe umasipala ngokusemthethweni.
Uthe umasipala kanye nosonkontileka babenesivumelwano ngaloluhlelo ngakho njengoba usonkontileka engaqedanga lesi sakhiwo sisawumthwalo wakhe kuze kube kuphuma isitifiketi sokuthi sekuphelile.
“Usonkontileka uyazi ukuthi lesi sakhiwo sesilinyaziwa kanti futhi usezibophezele ekuthni uzolungisa wonke umonakalo bese ayasiqedela, njengoba vele esebuyelile eseqalile ukulungisa.
“Uma ngabe lesi sakhiwo sesinikezelwe kwamasipala umasipala unecebo lokubeka onogada kule ndawo,” kubeka yena.
Uthe ukubekwa kwabadayisi sekuphothuliwe kanti abaningi bakhona ilabo akade sebedayise emgwaqei isikhathi eside.